हिँउदे अधिबेशनले तोक्ला त प्रदेश १ को नाम र राजधानी ? - Purbeli News
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ २०, २०७५ समय: १७:४८:३४
मोरङ । आईतबार बाट प्रदेश १ को हिउँदे अधिबेशन शुरु भएको छ । यो अधिबेशनबाट प्रदेशको नाम र राजधानी तोकिनेमा धेरैले आशा गरेका छन भने कतिपयले संशय समेत ब्यत्त गरेका छन । पटक पटक प्रदेशको नाम र राजधानीका बिषयमा बिवाद सिर्जना हुँदै आएको छ । यसपटकको अधिबेशनले नाम र राजधानी तोक्नेमा धेरै आशावादी समेत छन ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राइले भने प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा कसैको निर्देशन र दबाबले नहुने धारणा ब्यत्त गरेका छन । प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेश सरकारको भएकाले त्यसका लागि प्रदेश सांसदहरु सक्षम रहेको उनको धारणा छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलमा आइतबार पत्रकारहरु सँगको भेटमा मुख्यमन्त्री राईले ‘यही अधिबेशनबाट प्रदेशले नाम र स्थायी राजधानी पाउने र प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी सहमतिबाट टुङ्याइने समेत बताएका छन ।
उनले सबैको भावना प्रतिनिधित्व हुने गरी नाम र स्थायी राजधानी टुङ्गयाइने बताए । उनले आइतबारबाट सुरु भएको हिउँदे अधिबेसनमा महत्वपूर्ण ६ वटा विधेयक प्रदेशसभामा प्रबेश गराउने बताएका छन । प्रदेशसभाको हिउँदे अधिबेशन आइतबारबाट सुरु भएको हो । हिउँदे अविधेशन यस अघि नै प्रदेश प्रमुख डा. गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङले आब्हान गरिसकेका थिए । यस पटकको हिउँदे अधिवेशनले प्रदेश १ को नाम र स्थायी राजधानीको विषय टुँगो लगाउने बताइएको छ । त्यही भएर पनि अवको तीन दिनपछि सुरु हुने संसद अधिवेशनलाई बढो महत्वका साथ हेरिएको छ ।
प्रदेशका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले राजधानीको नाम र राजधानीको विषय टुँगो लगाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन । भण्डारीले सकेसम्म सर्वसहमतिका आधारमा यस विषयमा टुँगो लगाउने प्रयासका लागि आफूले सहजकर्ताको भूमिका खेलिरहेको बताए । यसअघि नेकपाको केन्द्रिय बैठकले भने प्रदेश १ को राजधानी बिराटनगर र नाम कोशी राख्ने सहमति भईसकेको कुरा सार्बजनिक भएको थियो ।